လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်နိုင်ပြီလား – Live the Dream
Saw Ku Gay Soe
လူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံစံလေးကို ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ခဲ့ဘူးကြမှာပေါ့? သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုတွေကြားမှာ ကိုက်ညီမှုမရှိပဲ ဟန်ဆောင်နေရတာ ပင်ပန်းတယ်..ဟုတ်တယ်ဟုတ် ကိုယ်ကဘယ်လိုလူပါ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးပါ၊ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထား အကျင့်စရိုက်တွေရှိသူပါ။ ဘယ်လိုဘဝမျိုးက လာတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုက ဒီလိုပါ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ပုံစံအမှန်ကို မပြရဲတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ လူတွေလက်ခံလို့ရတောင်မှ အထင်သေးခံရမှာစိုးလို့၊ လူတွေနဲ့ပိုမိုအဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွယ်ဝှက်ထားတတ်ပါသေးတယ်။ ဟန်ဆောင်နေတတ်ပါတယ်။
မလိုအပ်ပဲနဲ့ ဘောင်ခတ်မိတဲ့ အဖြစ်တွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ ကြောက်နေတာတွေ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် လုပ်ယူရတာတွေက မွန်းကြပ်စရာဆိုပေမယ့် ရုန်းမထွက်နိုင်သူတွေများစွာရှိပါတယ်။ ဆိုးကျိူးအနေနဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လူအသိုင်းအဝိုင်းကိုမနှစ်မြို့တော့ပဲ တစ်ယောက်တည်းစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာတွေ အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ? ဘာကြောင့်လုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်..
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံလို့မရတဲ့အရာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ခံလို့မရတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဟာကိုယ်ပါ။ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ စိတ်နေစိတ်ထားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ လူသားတွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံ၊ ကိုယ့်ရဲ့အရောင်က တစ်ခြားသောသူတွေနဲ့မတူနိုင်ပါဘူး။ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားပြီး ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့သူတွေမှ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ပုံစံက ရွံစရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် လက်မခံနိုင်ပဲ ရွံစရာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေရင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ဘယ်လိုရပ်တည်နိုင်မှာလဲ? လူတွေနဲ့ တန်းတူ (Mental Freedom) စိတ်ရဲ့လွှတ်လပ်မှု တွေရနိုင်မှာလဲ? လူတိုင်းမှာတော့ မတူညီတဲ့ ခံယူချက်တွေ၊ ခံစားချက်လေးတွေ၊ အကျင့်စရိုက်တွေ၊ ထူးဆန်းတွေအရာတွေ က ရှိစမြဲပါ။ ဘယ်သူနဲ့ အဆင်ပြေဖို့၊ ဘယ်သူတွေအထင်ကြီးလေးစားဖို့၊ ဘယ်သူချစ်ဖို့ မုန်းဖို့ စတာတွေကြောင့် တစ်ခြားသော ဇာတ်ရုပ်တွေ ဝင်သရုပ်ဆောင်နေရတာ ပင်ပန်းနေပြီဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်မှုနေမှုတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါဦး။
၂။ အမှောင်ထု စိုးမိုးမယ်..
သူတို့တွေနဲ့အဆင်ပြေအောင် ဟန်ဆောင်မှုကို လုပ်လိုက်မယ်ဟေ့လို့ တစ်ခါလုပ်မိလိုက်ရင် ဒီအရာက လုပ်နေကျ အကျင့်ဆိုးတစ်ခုလို ရှင်သန်ကြီးထွားလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစွာ၊ ရိုးသားစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ သတ္တိနည်းတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူတွေကြားတိုးဝင်ဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက် တွေထုတ်ဖော်ဖို့ ဘယ်လို ဝံ့ရဲပါ့မလဲ?။ လူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ဖြေရှင်းနေရတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေ၊ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားစိုက်ဖို့လည်း ခက်ခဲလာရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်ထင်ထား၊ မျှော်လင့်ထားတာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာပြီး ကိုယ်မှဟုတ်ရဲ့လား? ဆိုတဲ့ အားမလိုအားရဖြစ်မှုတွေ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီး ကျရှုံးမှုဆီကိုဆွဲချပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို စိတ်အမှောင်ထု ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီးနိုင်တာကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ခြင်းကို မလုပ်မိပါစေနဲ့။
၃။ အကျိုးဆက်ကို သိပါ
ဟန်ဆောင်မှု သက်တန်းရင့်လာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်ခံစားခြင်းတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကျဆင်းလာပြီး သွားချင်စိတ်၊ စားချင်စိတ်တွေပျောက်ဆုံးလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဝေးရာကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ ပင်ပန်းလာတတ်တယ်။ society တစ်ခုလုံးအပေါ်မုန်းတီးလာပြီး မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ဒုစရိုက် ကျူးလွန်မိတာမျိုးအထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲနေရတဲ့အကျင့်နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလာပြီး စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းတွေ၊ တိတ်တဆိတ်ကြေကွဲမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အထိ ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေ အန္တရာယ်ကြီးလွန်းပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးဆက်တွေကို နားလည်ရင်တော့ မလိုအပ်တဲ့ ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေ၊ အားနာခြင်းတွေ၊ သတ္တိနည်းခြင်းတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါနော်..
တစ်ခါတစ်လေကျွန်တော်တို့တွေက ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းအပေါ် သိပ်ပြီးအာရုံစိုက်မိနေကြတယ်။ လူတွေရဲ့အမြင်အပေါ်မှာပဲ ဖြစ်တည်မိနေတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လည်း.. လူတွေဆီက ချီးမွမ်းမှုကို ခံရရင် သာယာမိနေမယ်။ ကဲ့ရဲ့မှုတွေဖြစ်လာရင် ကျတော့ စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရတာတွေဖြစ်လာရတာပေါ့။ ဆိုပါစို့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုရလို့ ချီးမွမ်းခံရခြင်းမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြင် တစ်ခြားသူတွေက ဒီအောင်မြင်မှုအတွက် အားစိုက်ထုတ်ခဲ့ရလား? ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့သာ အောင်မြင်လာရတာဖြစ်တယ်။ သူတို့မျက်စိကျအောင်လုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ကဲ့ရဲ့မှုမှာရော ဘာကြောင့် ကျရှုံးရမှာလဲ? ချီးမွမ်းတာ၊ ကဲ့ရဲ့တာက လူတွေရဲ့အလုပ် Let them go.. လုပ်ပါစေ။ ကိုယ်ကသာ အဲ့သည်နှစ်ခုအပေါ် စိတ်ထားတတ်ဖို့ရယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၊ ကိုယ့်ပုံစံကို လေးစားတတ်ဖို့ရယ်၊ ချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကဲ့ရဲ့သည်ဖြစ်စေ အာရုံမထားပဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ဖို့ရယ်ပါ။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရသူများနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြား အဆင်ပြေအောင် အောင့်အီးသီးခံနေရတာမျိုး၊ ဇာတ်ရုပ်အမျိုးမျိုးကို သရုပ်ဆောင်နေရတာမျိုးကို အလွန်အကျွံ မဖြစ်ခင် ရုန်းထွက်ဖို့ သတ္တိရှိပါ။ လူတိုင်းမှာ သူ့စံနှုန်းနဲ့သူ လက်မခံတာတွေ၊ လက်မခံတာတွေ ရှိပြီးသားပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လက်ခံခြင်း၊ မခံခြင်းအပေါ်အာရုံမထားပဲ ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအမှန်နဲ့ ခံယူချက်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဖြစ်ချင်တာ၊ လုပ်ချင်တာတွေကို ရိုးရိုးသားသား ပြသနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ.။ ဟန်ဆောင်နေရတာကြောင့် လွှတ်လွှတ်လပ်လပ် မပြုံးနိုင်တာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ? အတွင်းစိတ်ရဲ့ သေးသိမ်မှုတွေ၊ အမှောင်ထုတွေ က ဆွဲချနေပြီလား? သန်မာဖို့ခက်ခဲမှန်းသိပေမယ့် ဝမ်းနည်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ ပျော့ညံ့မနေပါနဲ့။ လူသားတစ်ယောက်ပီပီ ယုံကြည်မှုရှိစွာ လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ။ ဟန်ဆောင်ခြင်းရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်ကို နားလည်ရင် ရုန်းထွက်ပါ။ ဒါက ကိုယ့်ကို လွှတ်မြောက်စေဖို့၊ လွှတ်လပ်စွာရှင်သန်စေဖို့ ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို အောက်က link လေးမှာ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင် ဟန်ဆောင်ရတာများလွန်းလို့ တိတ်တဆိတ်ဝမ်းနည်းတဲ့အချိန်တိုင်း အမြဲနားထောင်ဖြစ်တဲ့ မင်မင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ အားလုံးပဲ လွှတ်လပ်စွာရှင်သန်နိုင်ကြ ပါစေ…..